एउटा खानेपानी आयोजना कति बर्ष सम्म टिकाउ होला ? (भिडियो सम्वाद) - WASHKhabar
५ बैशाख २०७७, शुक्रबार ११:०० 278 पटक हेरिएको
इलाम : कुनै पनि खानेपानी आयोजना कति बर्षसम्म टिकाउ होला ? यसको तथ्यपरक जवाफ खोज्न त्यत्ति सजिलो छैन । तर हरेक खानेपानी आयोजना कम्तीमा २० बर्षसम्मको जनसंख्यालाई प्रक्षेपण गरी डिजाइन गरिएको हुन्छ । यसको मतलब २० बर्षसम्म मात्र टिकाउ हुन्छ, त्यसपछि चाहिं काम लाग्दैन भन्ने होइन । त्यसो त कतै–कतै राणाकालीन समयका खानेपानी आयोजनाहरुबाट समेत अझैसम्म खानेपानी उपभोग गरिरहेकै छन् ।
खानेपानी योजनाको दिगोपनाको कुरा गर्दा त्यसको इन्जिनियरिङ पक्ष, सामाजिक आर्थिक पक्ष, वातावरणीय तथा व्यवस्थापकीय र मानवीय स्रोत साधनको उपलब्धता जस्ता पक्ष जोडिएर आउने विज्ञहरु बताउँछन् । अझ अहिलेको समयमा त खानेपानीको डिजाइन गर्दा नै जलवायु समानुकुलनको पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।
इलामको माईजोगमाई गाउँपालिका वडा नं. ६ मा सञ्चालित यस्तै एउटा खानेपानी योजना छ । जसले बर्षौदेखि खानेपानी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । धुपीडाँडा भुलभुले खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गौतम विक्रम थेवे अझै यो खानेपानी योजना १५ देखि २० बर्षसम्म त केही नहुने दाबी गर्नुहुन्छ । खानेपानी योजना टिकाउ हुने धेरै आधारहरु पनि छन् उहाँसँग ।